AKHRISO:- Hanti-dhowaraha oo shaaciyey warbixinta baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda federaalka | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka AKHRISO:- Hanti-dhowaraha oo shaaciyey warbixinta baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda federaalka
AKHRISO:- Hanti-dhowaraha oo shaaciyey warbixinta baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda federaalka
Hanti-dhowaraha Guud ee Qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa soo saraay warbixin sannadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda Soomaaliya.
Warbixinahan ayaa ka kooban kuwo ka hadlaya dhaqaalaha soo galay dawladda Soomaaliya dibedda iyo gudaha iyo sida loo maamulay, gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan.
Ugu horrayn waxa uu sheegay inuu baadhitaan uu ku sameeyey sannadkan 25 hay’adood oo kuwa dawladda ah iyo saddex safaaradood.
Hanti-dhowraha qaranka waxa uu ku sheegay warbixintiisa in miisaaniyadda sannadkii 2020-ka ay ahayd $685 milyan, inta baaritaanka lagu samayeeyeyna ay ahayd $287.8 milyan.
Waxa uu sheegay in kharashaadka hay’adahaas kala duwan ee aan loo hayn dokumentiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin $9.1 milyan.
Waxa uu sheegay in kaharashaadkaas intaas dhan aysan wax caddaymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid ah hay’adaha uu baaritaanka ku sameeyey xafiiska hanti dhowrka.
Hanti-dhoworaha ayaa intaas ku daray in qandaraasyada ay bixiyeen hay’adaha dawladda ee aan laga diiwanagelin xafiiska hanti-dhowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan $31 milyan oo dollar.
Hanti-dhworraha Maxamed Maxamuud Cali oo ka hadlayey baaritaanka uu ku sameeyey sida loo maamulay lacagaha COVID-19 ayaa sheegay inay dawladda soo gashay lacag ka badan $51 milyan oo gudaha yo diebdda ah.